Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong » Gaa na Hong Kong iji chebe gị site na Dancing Jellyfish
Njem njem • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Dị ka ebe mbụ Hong Kong na-enweta ahụmịhe mmiri, Cube O Discovery Park abụghị naanị na-egosi ụwa mmiri na ndụ mmiri n'ụzọ ọhụrụ, kamakwa ọ na-ejikọ aghụghọ na-ejikọ oke osimiri n'ime oghere cubic pere mpe nke na-ebute oke osimiri nso n'aka ma jikọọ. ndị ọbịa nke okike n'ụzọ ọhụrụ na ụzọ ntụrụndụ.
Na -ekpuchi mpaghara karịrị 10,000 ụkwụ, Cube O Discovery Park ga -egosipụta ngwakọta nke ngosipụta ndụ mmiri n'ezie na egwuregwu mgbasa ozi mmekọrịta na -atọ ụtọ, yana ọtụtụ ntụrụndụ, agụmakwụkwọ na ohere iri nri.
Ọ dị mma maka nleta ezinụlọ na foto foto mgbasa ozi mmekọrịta, Cube O dị na nnukwu ụlọ ahịa ama ama Plaza 88 dị na Tsuen Wan na ọ bụ ebe ahụ ka Hong Kong nwere ahụmịhe ụgbọ mmiri mbụ na etiti obodo.
Cube O bụ ọrụ izizi na Hong Kong sitere na Cube Oceanarium - ama ama akụrụngwa aquarium ụwa - ọ bụ nsonaazụ nke mmekorita na -aga nke ọma n'etiti onye na -esepụta akụrụngwa aquarium kachasị elu, otu ndị na -arụ ọrụ akụrụngwa aquarium, ọkachamara na -ahụ maka nchekwa mmiri na onye ndụmọdụ teknụzụ. enwetala onyinye nturu ugo kacha mma abụọ na Hong Kong Film Awards.
Mgbe ị gara ileta Hong Kong ọzọ mgbe emepegharịrị, Cube O kwesịrị ịdị na listi ịwụ gị
Echiche dị n'azụ Cube O bụ imepụta ahụmịhe mmiri pụrụ iche nke na -egosipụta ụwa mmiri n'okpuru na ezigbo ndụ mmiri, yana mmetụta mgbasa ozi mmekọrịta, iji kwalite ozi nchedo mmiri.
Ahụmahụ mmiri maka ezinụlọ niile
A na -ekewa Cube O n'ọtụtụ mpaghara isiokwu nwere ihe nkiri dị iche iche gụnyere amụma windo acrylic mbụ nke Hong Kong. Nke a na -ejikọ echiche nke ezigbo mmiri mmiri nwere mmetụta ọkụ na -atụ anya na mmetụta onyinyo. Dịka ọmụmaatụ, a na -egosi jellyfish na kaleidoscope nke agba, ebe Virtual Reality (VR) na -akpọrọ ndị ọbịa na njem n'ime oke osimiri.
Enwekwara klaasị Mixed Reality (MR) jellyfish, ụlọ egwuregwu maka ụmụaka, na ebe iri nri. Ahụmahụ ndị a na-atọ ụtọ na-enye ụbọchị ezumike ezinụlọ zuru oke, yana ebe Instagrammable zuru oke maka ndị na-eto eto.
Ikpughere ala ịtụnanya
Site na ijikọta ndụ mmiri n'ezie na ọkụ nka na mmetụta onyinyo nke na -agbanwe jelii azụ ka ọ bụrụ ihe ngosi afụ mara mma, Cube O nwere olile anya ime ka ndị mmadụ mara oke osimiri. Jellyfish na -agba egwu yiri ka ha na -etinye aka na ballet n'oké osimiri ma na -emere ndị ọbịa ohere foto pụrụ iche.
Teknụzụ mgbasa ozi mmekọrịta ga -emekwa ka ndị ọbịa lelee ndụ mmiri nso ma mụtakwuo banyere okike, nchekwa gburugburu ebe obibi, na usoro ibi ndụ na -adigide. Mmetụta dị egwu a na -ahụ anya ga -eme ka a na -ebuga gị n'oké osimiri nke jupụtara n'echiche dị ịtụnanya.
Kaleidoscope nke oghere echiche efu na -enweghị ngwụcha
Jellyfish kaleidoscope jiri aghụghọ jikọta ihe onyonyo nke ezigbo jellyfish, yana enyo enyo enyo, ebe ọkụ mara mma na -egosipụta ọtụtụ ndò jellyfish n'akụkụ niile. Nke a na -emepụta oghere dị omimi nke ndị ọbịa ga -eche na emikpula ha n'ime.
Ụlọ ọrụ jellyfish
N'ikpeazụ, ndị ọbịa nwere ike gaa na ụlọ ọrụ nyocha jellyfish wee mụta ka jellyfish si etolite site na ụmụ ọhụrụ wee bụrụ ndị okenye wee chọtakwuo ihe gbasara gburugburu ebe obibi jellyfish na njiri mara ụdị jellyfish dị iche iche. Na mgbakwunye na ikiri nri jellyfish, a ga-ahapụkwa ndị ọbịa ka ha kpọtụrụ ha site na anya efu efu ma si otú a na-abịaru nso n'oké osimiri.
Nhazi mgbasa ozi
Egwuregwu mgbasa ozi mmekọrịta ga -akwalite ahụmịhe n'ozuzu ya, ebe ndị ọbịa nwere ike "bụrụ" obere azụ, na -egwu mmiri n'okpuru nchebe nke jelii na njem nlegharị anya n'oké osimiri. “Obere azụ” ahụ ga -ezo n'okpuru jelii azụ ka ọ na -akpachara anya maka ijide anụ ụlọ ma ọ bụ wakpo ndị anụ na -ezo n'akụkụ ya.
N'ime klaasị MR jellyfish, ndị ọbịa nwere ike bụrụ "ndị na -eche oke osimiri" wee chekwaa mbe mmiri na -acha akwụkwọ ndụ, nke chọrọ nlekọta nke ọma na nnukwu mbọ iji nyere mbe ahụ aka ka ọ gbakee wee gaghachi n'oké osimiri.
Ọrụ nnapụta na -agbaso usoro nnapụta mbe n'ezie. Ndị ọbịa ga -esonye ga -enwe ike ịmụ maka ọrụ ndị nchekwa nchekwa ọkachamara, chee maka mmetụta mmadụ nwere na oke osimiri, wee nweta echiche nke ozi gbasara nchekwa mmiri.
Ezinụlọ nwere oke osimiri egwuri egwu na iri nri kpakpando ise
Ụlọ egwuregwu ụmụaka na-egosipụta oghere egwuregwu Hong Kong nke mbụ nwere oke osimiri ebe ụmụaka nwere ike nweta ihe ọmụma mmiri ka ha na-ekpori ndụ site n'ịmụta ihe ịma aka anụ ahụ.
A na-eji agba ụmụaka na-ete mgbidi nke Playhouse ahụ iji mepụta gburugburu dị ọcha na ahụike, yabụ ndị nne na nna nwere ike iri nri dị mma dị nso na udo nke uche.
Ogige ahụ akpọbatala onye isi nri na ndị otu ya n'ụlọ nkwari akụ nke nwere kpakpando ise dị na mpaghara iji kwadebe nhọrọ nri pụrụ iche. Tụkwasị na nke ahụ, Corn Cone, akara ama ama ice cream Asia, akwadebela ụdị ice cream dị iche iche nke nwere oke osimiri ọkachasị maka Cube O. Ude mmiri pụrụ iche na-enye ọmarịcha ohere foto mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nke ọma.
Cube O bu n'obi ịkwalite ọtụtụ ndị mmadụ ịkwanyere ma chebe ndị bi n'oké osimiri ma sonye na nchekwa mmiri, site na ịnụ ụtọ na ịmasị echiche mara mma banyere ndụ mmiri, ịhụ njirimara ha, na itinye uche na -abanye n'ime mmiri n'okpuru mmiri site na ọtụtụ mmekọrịta mgbasa ozi dị iche iche. egwuregwu.
Cube O emebere ya ka ọ bụrụ ebe ntụrụndụ, izu ike, na mmụta maka ndị mmadụ n'otu n'otu na ezinụlọ, yana otu ụlọ akwụkwọ nwere ike ịchọpụta ụdị ndụ dị n'oké osimiri site na ihe omimi mmekọrịta.
n 2021, edepụtara ya dị ka nke iseth akwarium kacha mma n'ụwa site na webụsaịtị ọkwa ọkwa obodo wee họpụta 16th na nhọrọ nke akwarium iri ise kacha mma site na webụsaịtị Tour Scanner.